Waa maxay AirDrop iyo 5 beddel ee loogu talagalay Android | Androidsis
Waa maxay AirDrop iyo 5 beddelka ah ee loogu talagalay Android
Ignacio Sala | | Codsiyada Android, Tababarada
AirDrop waa a Adeeg Apple lahaansho waxaa laga heli karaa labada macruufka iyo macOS ee kuu oggolaanaya inaad si dhakhso leh oo raaxo leh ugu wareejiso feylasha inta udhaxeysa iPhone iyo Mac. Shaqadani waxay u timid labada macruufka iyo macOS labadaba 2011, laakiin sidoo kale waxaa laga heli karaa Android, inkasta oo, macquul ahaan, magac kale.
Beddelka Google ee loogu talagalay Android wuxuu ahaa Beam Android, Borotokool isgaarsiineed, ayaa sidoo kale la bilaabay 2011 iyadoo la adeegsanayo Ice Ice cream, taas oo suurtagelisay in lala wadaago faylasha nooc kasta oo faylal ah qalabka kale iyada oo loo marayo qalabka NFC. Si kastaba ha noqotee, Google ayaa ka tagtay horumarinteeda si ay diiradda u saarto ikhtiyaarrada cusub, dhakhsaha badan, lagu kalsoonaan karo oo ammaan badan
Adeegyada keydinta daruuraha bilaashka ah
Kuwo badan ayaa ah kuwa adeegsada taleefannada casriga ah si ay u hubiyaan xisaabaadka bangiga, u galaan shabakadaha bulshada, u qaataan sawirro iyo fiidiyowyo, u diraan emayllada ... Si kastaba ha noqotee, weli wali kombuyuutar u baahan hawlaha qaarkood sida samaynta nuqullo nuqul ah, tafatirka fiidiyowyada iyo / ama sawirrada ...
Haddii aad ka mid tahay kuwa adeegsada ee wali isticmaalaya kumbuyuutar, si ku-meel-gaadh ah ama si joogto ah, markaa waxaan ku tusi doonaa adiga barnaamijyadooda wadaagida faylka ugu fiican ee Android.
1 La Wadaag Dhaw
1.1 Sida loo kiciyo wadaag wadaag
1.2 Sida loo diro faylasha Share la wadaag
2 Samsung Quick Share
2.1 Sida loo dhaqaajiyo Share Share
2.2 Sida loola wadaago faylasha Samsung Quick Share
5 U dir Meel Walboo
La Wadaag Dhaw
Sidii aan kor ku soo sheegay, Google waxay ka tagtay Android Beam si ay diirada u saarto hab maamuuska isgaarsiinta faylka oo aad ufiican oo aamin ah: Wadaagista dhow. Si ka duwan sida loo yaqaan 'Android Beam', oo adeegsata qalabka 'NFC chip', Nearby Sharing waxay isticmaashaa isku xirka aaladda Bluetooth iyo Wi-Fi.
Sidan oo kale, looma baahna in la iswaafajiyo labada qalab inay awoodaan inay wadaagaan faylasha marka lagu daro bixinta xawaare aad uga sareeya isticmaalka NFP chip.
Si ka duwan sida loo yaqaan 'Android Beam', isticmaaluhu uma baahna inuu wax ka beddelo xaddid kasta oo awood u leh inuu adeegsado shaqadan. Dhalad Ahaan Wadaag Wadaag waa la damiyaySidan oo kale, waxaan iska ilaalineynaa inaan si joogto ah uga helno codsiyada gudbinta feylasha qof kasta.
Sida loo kiciyo wadaag wadaag
Dhalad ahaan, La wadaag Nearby asal ahaan waa laga joojiyay dhammaan taleefannada casriga ah, si looga hortago inaan si joogto ah uga helno ogeysiisyada dadka doonaya inay noo soo diraan feyl.
Si loo hawlgeliyo shaqadan, waa inaan qaadnaa tallaabooyinka aan hoos ku faahfaahiyay:
Waxaan marin u helnaa dejinta qalabkeenna.
Waxaan tagnaa liiska Google.
Gudaha liiska Google dhagsii Isku Xirka Qalabka
Ugu dambeyntii, guji La Wadaag Dhaw.
Marka xigana waa nalaku casuumay aan magac ku galno casrigayaga casriga ah si dadka raba inay noo soo diraan feylasha, ay si fudud ku aqoonsan karaan. Sida caadiga ah, "Magaca taleefanka ee qofka" ayaa la soo bandhigayaa.
Tallaabada ugu dambeysa ee ay tahay inaan sameyno ayaa ah dejiso muuqaalka qalabkeenna. Taasi waa, cidda aan dooneyno in la muujiyo jiritaankeenna terminal.
Qaab dhismeedka asalka ah ayaa loo dejiyey si kaliya xiriiradayada ay na arki karaan, laakiin waan awoodnaa beddel muuqaalka a Qaar ka mid ah xiriirada ama in qalabkayagu uu ku sii jiro shaqada la hawlgeliyey laakiin qarsoon si aan cidina inoo arki karin.
Sida loo diro faylasha Share la wadaag
U dirista nooc kasta oo feylal ah adigoo la wadaagaya agdhaw waa mid aad u fudud adoo raacaya talaabooyinka aan hoosta ku faahfaahinayo:
Marka hore, madax ugama soconno Sawirka Sawirka iyo Muuqaalka. Tusaalahan, aan wadaagno sawir qalab kale).
Marka aan ku jirno sawirka aan dooneyno inaan u dirno aalado kale adoo adeegsanaya howlaha u dhow, dhagsii badhanka Share.
Xulladaha kala duwan ee la muujiyey, ayaan ka xulannaa La Wadaag Dhaw. Haddii aan la muujin, dhagsii Dheeraad si aad u muujiso dhammaan xulashooyinka la heli karo.
Marka xigta, dhammaan xiriirada muuqda ee aan hareeraha ku hayno waa lasoo bandhigi doonaa. Si loo soo diro sawirka, waa inaan dirnaa dhagsii qaataha.
Qofka qaata wuxuu heli doonaa ogeysiis ku casuumaya inay aqbalaan rasiidka feylka. Markaad aqbasho, dirista sawirka ayaa bilaaban doonta waxaana lagu keydin doonaa galabta aaladda.
Samsung sidoo kale waxay u soo bandhigeysaa isticmaaleyaasheeda ikhtiyaar hooyo ah oo kuu oggolaanaya inaad u dirto faylal u dhexeeya aalado kala duwan, shaqadan loogu magacdaray Quick Share Si ka duwan AirDrop iyo Near by Google, Quick Share (oo kaliya laga heli karo taleefannada casriga ah ee Samsung iyo kiniiniyada) aad ayey u badan yihiin, maxaa yeelay waxay u oggolaaneysaa wadaagaan feyl dad badan iyo xadka ugu badan ee faylka la wadaagi karo waa 1 GB.
Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale noo ogolaataa ku wareeji waxyaabaha u dhexeeya Samsung casriga iyo kombuyuutarka, isla shaqeynta ay Apple na siiso AirDrop laakiin ku xaddidan nidaamkeeda deegaanka. Share Share ayaa adeegsanaya labada isku xirnaanta qalabka 'Bluetooth' iyo kan Wi-Fi, kan ugu dambeeya ayaa ah midka loo adeegsaday in lagu diro faylal waaweyn.
Sida loo dhaqaajiyo Share Share
Waxaan tagnaa liiska dejinta laga bilaabo terminaalkeena.
Marka xigta, dhagsii Astaamaha horumarsan.
Hawlaha horumarsan, waxaan dhaqaajineynaa furaha Toos Share.
Marka xigta, waa inaan dhisnaa cidda ay yihiin waxaan rabnaa inaan wadaagno nuxurka iyo muuqaalka shaqadan ee loo yaqaan 'terminals' ee nagu hareeraysan.
Sida loola wadaago faylasha Samsung Quick Share
Markaan habayno hawsha 'Share Share' ee degdegga ah ee raacaysa tillaabooyinka lagu faahfaahiyey qaybta hore, waxaan helnaa guddiga xakamaynta iyo waxaan dhaqaajineynaa howlaha Share Share.
Marka xigta, waxaan aadeynaa feylka aan rabno inaan wadaagno, dhagsii badhanka wadaag oo waxaan u xushaynaa Share Share sida habka rarka. Marka xigta, dhammaan xiriirada aan ku leenahay agagaaraha waa la soo bandhigi doonaa waxaana dooran doonnaa qofka qaata.
Haddii qofka aan dooneyno inaan u dirno feylkiisa lama soo dhexsaarin xiriirada Marka ay timaado wadaagista, waa inaan dib u eegno xulashooyinka muuqaalka, maadaama ay u badan tahay inay tahay Qarsoon.
Labadaba La Wadaag Dhaw iyo Deg Deg Share, uma baahna qadka internetka ama Wi-Fi si aad u awoodo inaad la wadaagto faylasha, maaddaama maqnaanshaha kuwan, xiriirka Bluetooth ayaa la isticmaalay.
Mid ka mid ah xalka ugu caansan ee loo yaqaan 'ecosystem Android' si loola wadaago faylasha aaladaha kale, Android ama iPhone ha ahaadaan AirDroid. Codsigan, oo waliba noo oggolaanaya inaan faylasha la wadaagno kombiyuutarrada ay maamusho Windows, macOS ama Linux, waxay noo oggolaaneysaa inaan la wadaagno nooc kasta oo ka kooban, iyadoon loo eegin cabbirka ay ku fadhiyaan.
Sida loo sii daayo kaydinta WhatsApp qalabkeeda gudaha
Si ka duwan xalalka ay bixiyaan Google iyo Samsung, waxaa lagama maarmaan ah in lagu rakibo codsi qalab kasta meesha aan rabno inaan ku wadaagno ama ka helno nuxurka. Intaas waxaa sii dheer, dalabka waxaa ka mid ah xayeysiis iyo taxane ah iibsasho gudaha-app ah si aad uga faa'iideysato dhammaan howlaha uu na siinayo, kuwaas oo badan.
AirDroid: gelitaanka iyo faylasha
Developer: CAND STUDIO
Beddelka xiisaha leh haddii ma rabto inaad tagto rakibida barnaamijyada si aan ula wadaagno faylasha waxaan ka helnaa Qabow, adeegga shabakadda (ma aha codsi) oo noo oggolaanaya inaan wadaagno waxyaabaha ka dhexeeya casrigayaga iyo kombuyuutarka illaa iyo inta labaduba ay ku xiran yihiin isla shabakadda Wi-Fi.
Markaad marin u heleyso degelkan mar haddii labada qalabba ay ku xiran yihiin isla shabakadda Wi-Fi, dhammaan qalabka ku xiran waa la soo bandhigi doonaa. Si aan ula wadaagno nooc kasta oo fayl ah, waa inaan gujino qalabka aan dooneyno inaan u dirno feylka.
Marka xigta, liiska xulashooyinka ayaa lasoo bandhigi doonaa oo nagu casuumaya ka xusho sawirada ama feylasha qalabkeena (marka laga hadlayo noqoshada taleefanka casriga ah). Waxaan doorannaa feylka oo waxaan sii wadnaa inaan dirno.
U dir Meel Walboo
Xalka kale ee cajiibka ah markay tahay dirista feylasha inta udhaxeysa aaladaha mobilada iyo / ama kombiyuutarada, waxaan kaheleynaa Meelkasta Meelkasta. Waxqabadka waa isla kan ay AirDroid na siiso, oo nagu qasbaya inaan rakibno codsi u gaar ah si aan u awoodno inaan wadaagno faylasha, maaddaama aysan ka shaqeynaynin Bluetooth sida haddii xalka Google iyo Samsung ay sameeyaan.
Barnaamijkan waa la heli karaa labada Android iyo iOS, Amazon Kindle, Windows, macOS, Linux iyo xitaa qaab kordhin loogu talagalay Chrome, ikhtiyaarkan ayaa ah midka ugu badan ee lagu taliyay haddii aan si goos goos ah ugu baahan nahay inaan la wadaagno waxyaabaha hal ama dhowr kombuyuutar.
U dir Wax Kasta Meesha laga heli karo adiga ku soo dejiso bilaash, waxaa ka mid ah xayeysiisyada iyo iibsashada barnaamijka si aad uga faa'iideysato. Si ka duwan barnaamijyada kale, arjiga waxaa laga heli karaa interface gaar ah oo loogu talagalay kiniiniyada.
Meel U dir (Wareejinta Faylka)
Developer: Shirkadda Estmob Inc.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Waa maxay AirDrop iyo 5 beddelka ah ee loogu talagalay Android
6da badal ee ugu wanaagsan WhatsApp si bilaash ah oo sir badan leh
Barnaamijyada ugufiican ee lagu helo xeryaha